Nhau - Ndeapi mabasa ane muchina wekuveura simbi?
Muchina wekugera simbiine huwandu hwakasiyana hwemashandisirwo, kushanda kwakanyanya, kushanda kuri nyore, uye kugadzirisa kuri nyore. Iyo saiti inogona kuiswa mukati kana kunze. Muchina wekuveura simbi unogadzirwa uchishandisa nzira dzesainzi. Chinhu chekutanga ndechekuti mota inodzorwa neanorongeka controller zvinoenderana nezvatinoda. Kudzvanywa, kumhanya uye sitiroko inoumbwa nazvo zvese zvinogona kuve zvichibva pazviriIyo tekinoroji inoda kugadziriswa, uye kurambidzwa uye mamwe mabasa anogona kupedzwa zvakanaka.
Muchina wekugera simbiine basa remichina miviri mune imwe, inogona kudzvanya (simbi yakaraswa, mhangura, marara ealuminium, simbi yesimbi, simbi isina tsvina, marara emotokari, nezvimwewo) mumapakeji emhando dzakasiyana uye zvakatemwa senge cuboid, octagon, uye silinda. . Iyo block inozochekwa kuita inokodzera pre-processing zvinhu. Iyi nhevedzano yemashears esimbi inonyanya kushandiswa mumagetsi esimbi, simbi kudzokorodza uye kugadzira maindasitiri, maindasitiri ekugadzira uye maindasitiri ekunyungudutsa.
Pakuveura chidimbu chinokunguruka, chipande chokuveura inofanira kufamba nechidimbu chinofamba, kureva kuti, blade yekuveura inofanira kupedzisa zvose kucheka nekufamba panguva imwe chete, uye pakarepo sub-velocity v yebeura rekugera munzira inofamba yechidimbu chinoputika inofanira kufanana neyo chidimbu chinokunguruka. Iyo yekufamba kumhanya vo yakaenzana kana yakakura kupfuura 2%~~3%, kureva, v=(1~1.03)v0. Pakuveura chidimbu chakakungurutswa, kana kukurumidza kukurumidza v kwebeura rekugera munzira inofamba yechidimbu chakakungurutswa iri pasi pekumhanya kwechipenga v0 chechidimbu chakakungurutswa, kugera kumucheto kunotadzisa kufamba kwechidimbu chakakungurutswa, izvo zvinokonzeresa. chimedu chakakungurutswa kuti chikotame, uye kutokonzera kuti chidimbu chinomonereka chiputire tsaona yebanga. . Sezvineiwo, kana iyo pakarepo velocity v yeshear blade munzira yekufamba kwechidimbu chakakungurutswa panguva yekuveura yakakurisa kupfuura kumhanya kwechipenga chakakungurutswa v0, kushushikana kukuru kunogadzirwa muchidimbu chakakungurutswa, icho chinozokanganisa shear kunaka kwechidimbu chakakungurutswa. Uye wedzera kukanganiswa kwemuchina wekugera.
Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzechigadzirwa uye zvakatemwa uye zvinodiwa nemushandisi, muchina mumwe chete wekuveura simbi inofanira kukwanisa kucheka maitiro akawanda kusvika pakureba, uye kuita kuti kureba kwechidimbu kushivirira uye kunaka kwechikamu chekucheka kunosangana nemirairo yakakodzera;) Inogona kusangana neguyo rinoputika kana chikwata Chigadzirwa chinodiwa.
Nguva yekutumira: Kurume-09-2021
Homemade Cardboard Baler, Aluminium Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Zvimedu Metal Compactor, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Leaf Compactor uye Baler,